किन बढ्दैछ सडक दुर्घटनाको ग्राफ ? मूख्य जिम्मेवार को ? « Janata Samachar
किन बढ्दैछ सडक दुर्घटनाको ग्राफ ? मूख्य जिम्मेवार को ?
काठमाडौं । मानिसहरु कोरोना भाइरसको त्रासमा छन् प्रत्येक दिन कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्या मात्रै सार्वजनिक भइरहन्छन् । तर करिब एक वर्षको समयलाई हेर्ने हो कोरोनाभन्दा बढी त प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनामा परेर ज्इान गुमाउनेको सङ्ख्या बढी छ ।
पछिल्लो समय दैनिकजसो सवारी दुर्घटना र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पछिल्ला केही दुर्घटना यस्ता छन् ।
शनिवार राती मध्यपुरथिमि नगरपालिका–३ कौशलटारको छ लेन सडकमा भएको दुर्घटनामा परि एक युवतीको मृत्यु भयो भने तीन जना सामान्य घाइते भए ।
भक्तपुरबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बा८च ४७५६ नम्बरको कार शनिवार राती कौशलटारको बीच सडकको फलामे रेलिङ भाँच्दै सडक छेउमा रहेको सिमेन्टको खम्बामा ठोकिएर पल्टियो ।
दुर्घटनामा कारमा सवार काठमाडौँ महानगरपालिका–४ धुम्बाराही पीपलबोट बस्ने ३० वर्षीया रिया श्रेष्ठको मृत्यु भयो । दुर्घटना भएपछि कारमा रहेका चालकसहित अन्य तीन युवा घाइते अवस्थामा रहेकी महिलालाई छाडेर फरार भए । घाइते महिलालाई अस्पताल पुराउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरिदिए ।
आइतबार बिहान डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका– ७ चबरा चौतारामा जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाले ज्यान गुमाए भने चारजना घाइते बने । दीपायलबाट चबरा चौताराका लागि छुटेको म१च ५५० नम्बरको जिप दुर्घटनामा परेको थियो ।
दुर्घटनामा परेर बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका– ७ चबरा चौताराका वडासचिव समेत रहेकी नायबसुब्बा २८ वर्षीय मञ्जु त्रिपाठी, उनकी सासूआमा र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा कार्यरत केआइसिंह गाउँपालिका–४ चनकेसैन निवासी कृषि प्राविधिक हरि भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
गएराति १ बजेको आसपासमा भएको दुर्घटनामा मृतक मञ्जु त्रिपाठीका तीन वर्षीय छोराको समेत उपचारका लागि लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भयो । आठजना सवार जिप सडकबाट करिब दुई सय मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनाको कारण अझै खुल्न सकेको छैन ।
मंसिर २१ गते आइतबार नै दोलखाको बिगु गाउँपालिका ५ लाइसेपमा पनि जिप दुर्घटना भयो । दोलखाको चिलङ्खाबाट सिंगटी बजार जाँदै गरेको बा२०च ४३७३ नम्बरको जिप बिगु गाउँपालिका ५, लाइसेप भन्ने स्थानमा आइतबार बिहान ६ बजे दुर्घटनामा पर्यो । कच्ची सडकबाट १ सय ५० मिटर तल खसेको जिपका चालक गौरीशङ्कर गाउँपालिका ८ खारेका २४ वर्षीय सुविन तामाङको मृत्यु भयो । दुर्घटनामा गौरीशंकर गाउँपालिका ५ की २२ वर्षीया कमला तामाङ घाइते भएकी छिन् ।
मंसिर २० गते हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ डाँडाफयाको जबुका नजिकै लु २ च २१०२ नम्बरको बलेरो जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए । दुर्घटनामा एक बालकसहित सात जना घाइते बने । सिमकोटबाट बिरामी लिन हेप्काखोला गएको जिप बिरामी बोकेर फर्कँदा दुर्घटना भएको थियो ।
मंसिर १८ गते बिहीबार कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको गाईमारा सडकखण्डमा जन्ती बोकेको माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा बेहुला–बेहुलीसहित १३ जना घाइते भए । बैतडीबाट कञ्चनपुर जाँदै गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०१–००१ज १२५४ नम्बरको माइक्रोबस सडकबाट खस्दा घाइते बनेकामध्ये २ जनाको अवस्था गम्भीर भयो । बेहुली भित्राएर खुशीयाली बनाउने समय अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आयो ।
यही मंसिर १३ गते शनिबार रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका– ७, दाँजेमा शुक्रबार राति जिप दुर्घटना हुँदा ५ जनाको ज्यान गयो । जन्ती बोकेको जिप सडकभन्दा एक सय मिटर तल खस्दा चारजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार आठबिसकोट नगरपालिका– ८ को दाजेबाट १२ जना जन्ती बोकेर वडा नम्बर १० को घारीखोला फर्किरहेको रा१ज ५८९ नम्बरको जिप दाजेनजिकै दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनापछि चालक डिल्लीबहादुर नेपाली फरार भए ।
गत कात्तिक २७ गते बिहीबार बैतडीमा बस दुर्घटना हुँदा ९ जनाले ज्यान गुमाए । जिल्लाको पाटन नगरपालिका–८ खोड्पेमा बस दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु भयो भने ३४ जना घाइते बने । दार्चुलाको गन्नाबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको पवनदूत यातायातको ना५ख ५१४१ नम्बरको बस कात्तिक २७ गते राती साढे १० बजेतिर दुर्घटनामा परेको थियो ।
यी त केवल पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाका केही प्रतिनिधि मात्रै हुन् । पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि हालसम्मको अवधिमा सवारी दुर्घटनाकै कारण १४ हजार ६ सय ३४ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।
प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा २ हजार ४ जना, ०७२–७३ मा २ हजार ६ जना, ७३–७४ मा २ हजार ३ सय ८४ जना र २०७४–७५ मा २ हजार ५ सय ४१ जनाले सवारी दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ हजार ७ सय ८९ जना, २०७६–७७ मा २ हजार २ सय ५५ जना र चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ६ सय ५५ जनाले सवारी दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
सडक दुर्घटनामा चालक, सडक र यान्त्रिक त्रुटी कारक
पछिल्ला समय सवारी दुर्घटनाको दर निकै भयावह बन्दै गएको छ । सवारी दुर्घटनामा परि हरेक वर्ष २ हजार ३ सयको हारहारीमा मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ । सवारी दुर्घटना हुनुमा चालक, सडकको अवस्था र यान्त्रिक त्रुटी गरि मुख्यतः ३ कारक रहेको छ ।
विश्वभर भएका अध्ययनलाई हेर्ने हो भने १२ प्रतिशत दुर्घटना यान्त्रिक गडबढीका कारण हुने गरेको छ । नेपालमा कुन कारणले धेरै दुर्घटना भएको हो भन्ने अध्ययन त भएको छैन यद्यपि नेपालमा सहरी क्षेत्रमा चलेर पुराना भएका सवारी ग्रामीण क्षेत्रमा चलाइने भएकाले पनि दुर्घटनामा यान्त्रिक कारण धेरै हुनसक्ने अनुमान गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा निर्देशक ईञ्जिनियर रामचन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ ।
परीक्षण केन्द्रबाट सवारीको ब्रेक फोर्स कति छ, एक्सएल लोड कति, टायरको स्लिम कतिजस्ता प्रविधिक कुरा देखिन्छ । यसरी परीक्षण गरिएका सवारी ब्रेक फेल हुने, टायरमा समस्या आउने लगायत कारणले दुर्घटना हुनबाट जोगाउँछ । तर नेपालमा त्यस पाटोमा कुनै चासो दिइएको पाइदैन ।
आधुनिक फिटनेस सेन्टरमा जाँच गर्दा सवारीको अगाडि र पछाडिको पाङ्ग्रामा कति भार हुनु पर्ने, सवारीको क्षमताअनुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ या गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन पाङ्ग्राको साइड स्लीप, हर्न, हेडलाइट लगायतको पूर्णता आउँछ र सवारीको अवस्था थाहा हुन्छ । विदेशमा सवारी परीक्षणको सर्टिफिकेटबिना सवारी गुडाउन नपाइने प्रावधान छ । तर नेपालमा हालसम्म सवारी परीक्षण ‘धामीले नाडी छामेर बिरामी उपचार’ गरेझैं हेरेर मात्रै प्राविधिक जाँचपास गर्ने गरिएको छ ।
विगतमा उपभोक्ता समिति र जिविसले खनाएको बाटो डोजर इन्जिनियरिङमा आधारित रहेर बनाइएको थियो । यस्ता बाटोमा ट्रयाक खुल्नेबित्तिकै सवारी चलाउने गरिन्छ । बाटोमा बनेका टर्निङहरु सवारीको टर्निङ रेडियस स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ छैन, सवारीको क्षमता अनुसारको उकालो बनेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा न त यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेको छ, न त सवारी व्यवसायीले नै । बाटोको डिजाइन राम्रो नहुँदा पनि ग्रामिण सक्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटना प्रमुख कारक रहेको प्रहरी प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ ।
सडक मर्मत संम्भारमा लापारवाही
पुराना सडकहरु समयमै निर्माण नहुने र नयाँ निर्माण भएका कैयौँ सडकहरु कमसल कच्चा पदार्थ र ठेकेदारको लापारवाहीले ४–५ महिना पनि टिकाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सवारी दुर्घटनामा सरकार र व्यवसायीबीच आरोप–प्रत्यारोप लाग्ने गरेको छ ।
सरकारले व्यवसायी र चालकलाई दोष दिने गरेका छन् भने व्यवसायीले सरकारले समयमै बाटो मर्मत सम्भार नगर्दा दुर्घटना निम्तने गरेको आरोप लगाउँछन् । सरकारले सडकलाई संवेदनशील क्षेत्र मानेर भरपर्दो, सुरक्षित सडक बनाउने विशेष ठोस कदम अघि सार्न चुक्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको यातायात राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव सरोज सिटौला बताउनुहुन्छ ।
पछिल्ला केही दुर्घटनालाई हेर्ने ओ भने अधिकांश दुर्घटना ग्रामीण भेगका कच्ची सडकमा भएका छन् । हाल देशभर सडक खन्ने होडबाजी नै चलेको छ तर भत्काइएको सडक महिनौंसम्म अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारले सबै सडक तथा राजमार्ग नियमित रूपमा कालोपत्रे गर्न तथा खाल्टाखुल्टी पुर्न सकेको छैन । जसका कारण पनि सडक दुर्घटना बढेको सरोकारवालाको भनाई छ ।
सवारीसाधनको चाप बढेको छ तर सडकको अवस्था भने उस्तै छ । फरक–फरक सवारीसाधनका लागि फरक–फरक लेन हुनुपर्ने भएपनि नेपालमा पैदल यात्री हिँड्ने बाटोसमेत अर्को छैन । सडक निर्माणको डिजाइनमा नै त्रुटि रहेका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको सडक सुरक्षा इन्जिनियर कृष्णनाथ ओझाको अनुभव छ ।
तर सरकारी अधिकारीहरूले भने दीर्घकालीन महत्वका काम पनि अघि बढाइएको र साना कुरालाई नजरअन्दाज नगरेको तर्क गर्ने गरेका छन् ।